Yekushandisa renji yeanowoneka ma module
Parizvino, Optical modules inowanzo shandiswa muInternet data Center network, metro Optical Transmission Networks, Telecommunication Networks inomiririrwa ne5G Bearer Network, uye Vhidhiyo-Yakatsanangurwa Vhidhiyo. Iko kune maviri akaenzana optical module. Imwe ndeye GBIC fiber optic module, uye zvakare iyo ...
DAC Tambo uye AOC Tambo anoshandiswa zvakanyanya mu data centre yepamusoro-performance komputa network kabling masisitimu muhupenyu hwezuva nezuva nekuda kwekudzikira kwavo latency, kuderera kwesimba kushandiswa, uye mutengo wakaderera. Direct Attach Cable (DAC) ine tambo-mbiri dzemhangura tambo. Tambo dzeDAC dzakakamurwa kuita mhando mbiri: acti ...
Kushanda kweiyo module ye optical
Iyo yepazasi yeiyo optical module inonyanya kushandiswa mumamiriro matatu: telecommunication bearer network, access network, data centre uye Ethernet. Ese ari maviri materevhizheni anotakura netiweki uye mapindamambure ekuwana ndeemusika wevaterevhizheni. Pakati pavo, WDM optical module anonyanya kushandiswa kune epakati an ...
Rinoshanda Manyiminya module
Photoelectric shanduko ndiro rakanyanya basa reiyo optical module. Mugumo unofambisa unoshandura chiratidzo chemagetsi kuita chiratidzo che optical, uye chiratidzo chema module chinotapurirana kuburikidza neiyo fiber fiber. Ipapo iyo yekupedzisira mugumo inoshandura iyo optical chiratidzo kuita yemagetsi si ...
Chii chinonzi BIDI optical module?
Parizvino, mazhinji emamojuru emagetsi pamusika anotumira data kuburikidza nemaviri mafaera emagetsi. Imwe fiber inoshandiswa kutambira data kubva kunetiweki yedhizaiti, uye zvakare iyo yakatarisana fiber inoshandiswa kuendesa data kune network network. Nekudaro, pane zvakasiyana siyana zveiyo optical module iyo inogona kuona data ...
Nhanganyaya yeiyo optical module
Ndezvipi zvinhu zvemukati meiyo module? Optoelectronic zvishandiso, anoshanda maseketi uye einternet maficha. Iyo optoelectronic chishandiso inosanganisira kuendesa uye kugamuchira zvikamu. Mumashoko akareruka, mashandiro eiyo module yemagetsi ndeyekushandura chiratidzo chemagetsi kuita chiratidzo che optical ...
Kudzosera tekinoroji yemotokari waya sunga chinobatanidza chinongedzo
ne admin pane 21-05-22
1 Nhanganyaya Iyo yemagetsi wiring sunga ine ma terminals, sheaths, waya, zvinongedzo, matepi, mabhora mapombi, PVC mapaipi, anodzika kupisa machubhu, fuses, fuse mabhokisi, uye zvimwe zvishongedzo. Inoshanda senetiweki network yemotokari, inotumira masaini, uye inoita simba remagetsi. D ...
Kuongorora uye Kushanda kweNew Energy Yakakwira Voltage Connector Sisitimu
Iyo yepamusoro-voltage yekubatanidza inoumbwa ne: dzimba (murume magumo, mukadzi magumo), terminal (maleand yevakadzi terminal), inovhara chifukidzo, kuvhara (muswe, hafu kumagumo, waya kumagumo, kuonana), inodzivirira muswe chifukidziro, yakakwira-voltage inopindirana system , CPA system, uye zvimwe zvakaumbwa. ...
Matambudziko uye kusimudzira maitiro eemotokari tambo indasitiri
Pakazosvika 2020, yangu nyika yechinyakare mota musika tambo musika ichave ingangoita mabhiriyoni gumi nemaviri yuan, uye nyowani magetsi emagetsi tambo musika ichave angangoita 1,35 bhiriyoni yuan. Nekukura kwakadzikama kwemusika musika weangu nyika indasitiri yemotokari uye nekuwedzera zvishoma nezvishoma muhuwandu ...
Kugadzira mhinduro panguva yeCOVID-19
Sezvo COVID-19 denda rakagadzirisa zvese zvese zvehupenyu hwedu, zvakakosha kutora nguva yekufunga nezve mamiriro atiri panguva ino yakaoma. Isu paOlink Manufacturing Solutions tinoda kupa rukudzo kune avo vari kunetseka pamberi pechirwere ichi, kusanganisira vanachiremba, mukoti ...
Ndezvipi zvinhu zvemhando yepamusoro zvekudzora mota wiring sunga yekugadzira maitiro
Seimwe yezvinhu zvakakosha zvemotokari, mota wiring sunga inoita basa rekubatanidza mota yemagetsi yemagetsi ese. Kana matambudziko emhando yepamusoro akaitika muhusungwa hwewiring, zviri nyore kukonzera kukanda kwakachengeteka, chengetedzo, uye kudzivirira njodzi. Semutengesi we ...
Dhizaini yekudzidza yeakakwira-magetsi wiring sunga emagetsi mota
1. Nhanganyaya Semutumbi mukuru weiyo mota yemagetsi system, mota wiring sunga ndiyo inotakura yemagetsi magetsi kufambisa uye kufambisa chiratidzo, izvo zvakakosha kwazvo pakufambisa mota dzemagetsi. Pakati peyemagetsi wiring harnesses, mota yakakwira-voltag ...
Taura kushandiswa kwe hydraulic hose zvakadzama
Iko kuiswa kwemahosi kwakakamurwa kuita tambo yekukochekera, yekudonha mvura hoses, yekufema pombi, yekugeza hoses, uye wiring sunga machubhu. Mashoko acho akaparadzaniswa kuita hosipisi hosipaipi, simbi hosipaipi, yemarata hosipaipi, yerabha hosi, uye epurasitiki hosipaipi. Iyo hydraulic hose inoumbwa neyemvura-resista ...
Mvura Inodonha yeT & C Kukundikana Maitiro eWaya Sunga Sisitimu Series
Ichi chinyorwa ndechekupedzisira mu "T & C Kukundikana Series." Zvekudonha mvura, mhedzisiro inotarisirwa inowanzo kuve neanotevera mapoinzi: #Terminal ngura #Voltage donhwe kuwedzera #Circuit haina kubatana Kuongororwa kweanogona kutadza zvikonzero: (Cherekedza: Iyo yekuisa chisimbiso plug inotaurwa mune ino ar ...
Kukundikana kweT & C nekukonzeresa kukonzeresa wiring sisitimu yakateedzana (3)
Nhasi tichataura nezve yakanyanya kuoma fomu yekubatanidza kutadza. Tatu, ablation Kazhinji, kana changova chimiro ichi, hupenyu hwechisungo hunopera. Zvakare, ini ndinoyeuchidza munhu wese kuti iyo yekundikana mamiriro echokubatanidza ichawanikwa ichichinja. Zvichienderana nechikonzero, kuramba kwacho kwakakura. Mu...
T & C general application kutadza maitiro uye inogona kukonzera kuongororwa kweiyo wiring harness system dzakateedzana (2)
2. Kuwedzera kuramba -Mafomu akajairika ekundikana: 1. Kuwedzera kwemhepo kudonha; 2. Kurasika kwechiratidzo; 3. Chiuno chakatsemuka. Kutaura nezve izvi, vamwe vanhu vanogona kuti kana iwe ukataura zvishoma, zvinokonzeresa kubvisa. Ehe, iwo musoro wenyaya wekubvisa, ini ndoda kuuchengetedza gare gare, chokwadika, kana iwe ...
T & C general application kutadza maitiro uye zvingangokonzeresa kuongororwa kweiyo wiring harness system dzakateedzana (1)
Dzimwe shamwari dzakabvunza munyori kuti agovane kuongororwa kwekutadza uye kukundikana nekuti mainjiniya edu ekubatanidza vanoshandisa chikamu chakakura chesimba ravo kugadzirisa mota pabasa ravo rezuva nezuva. Tevere, munyori anoshandisa mashoma mapeji kupfupisa akajairwa matambudziko uye zvinogona kukonzera T & ...
Waya pane waya tambo
Kutaura nezve tambo pane iyo wiring harness, isu tinofanirwa kutanga tazvipatsanura. Zvikasadaro, hazvina kunaka kuita general. Kubva panzvimbo yekushanda yekutarisa: 1. Tambo yemagetsi; 2. Ground waya; 3. Signal mutsetse; Inogona kuve yakakamurwa kuita zvikamu zvitatu izvi. Ndokumbira utarise kuti waya dzakataurwa mu ...
Ndeipi yakanaka tambo dhizaini
Zvakangoita sekuti vanhu vane chiuru vane Hamlet chiuru. Pamwe iyo fiyuzi sarudzo chaiyo, Kana chifukidziro chakasarudzwa? Iyo waya inowirirana fiyuzi zvakanaka here? Iyo relay inosarudzwa here? Iyo yekuvhara yakasarudzwa? Iyo 3D wiring inonzwisisika pasina kupindira? Uye zvichingodaro… Zvataurwa pamusoro apa zvese ...
Kufunga nezve kusimukira kweyeye mota wiring sunga
Iko shanduko yemazuva mana emanjemanje akaisawo mberi zvakanyanya kuomesera zvinodiwa mukugadzira mota wiring sunga tekinoroji. Yakakwira voltage uye isina huremu ndiyo isingachinjiki yekuvandudza kodhi yemotokari wiring sunga indasitiri. Yakakwira-voltage magetsi emagetsi, asi t ...
Muviri mutongi (BCM) kutyaira wedunhu waya dhayamita kusarudzwa.
Nheyo yeiyo wiring harness ndeyekugadzira yekumusoro-pasi simba rekugovera uye pasi-kumusoro magetsi ongororo. Maitiro ekuongorora akavakirwa pakusarudza fiyuzi kutanga uyezve kusarudza waya. Kana zvasvika pakusarudzwa kwetambo dhayamita, hapana nzira yekudzivirira iyo yechinyakare yekuda ...
Kusanzwisiswa kwekugoverwa kwesimba kweBCM
BCM, vagadziri vazhinji vane mazita akasiyana uye vanogona kukamurwa mumamojuru mazhinji, asi zvakadaro, kuitira mukana wekukurukurirana, isu tichiri kudaidza BCM zvakafanana. Mumakore ese apfuura makumi maviri, kuvandudzwa kwetekinoroji yeBCM yakafambira mberi zvakanyanya. Nekudaro, pane dambudziko risina ...
Chii chinofanirwa kubhadharwa mukutora kwetambo yekugadzirisa uye tambo yekusungira kuungana?
Seunyanzvi hwekugadzira tambo yekugadzirisa tambo, isu takapfupisa mamwe mapoinzi ekucherechedzwa muwaya tambo uye tambo yegungano kugadzira kune yako mareferenzi akatsigirwa makore eindasitiri ruzivo. Hazvinei kuti isu tiri kugadzira yakapusa imwechete waya kana tambo yekugadzirisa kana yakaoma wiring ...
Ndeipi huru waya tambo yemusangano inogona kudzidza uye kutora kubva kune hwakazara dhizaini yemotokari musangano musangano?
Isu hatisi kutaura nezve tambo yegungano, asi gungano remotokari. Izvo zvinosetsa, isu tiri kugadzira tambo yegungano uye wiring sunga mota. Asi ini ndinofunga isu tinogona kudzidza chimwe chinhu kubva kumotokari gungano kune yedu tambo yegungano uye tambo tambo yekusunga. Ngatitarisei tione. Kurongeka kwemotokari yekupedzisira asse ...
Kudzora kwemhando yepamusoro mukugadzirwa kwemotokari wiring harness
Ichi chinyorwa chinobatanidza iko chaiko kugadzirwa kwemaitiro emota wiring sunga zvinoenderana neakakomba mashandiro e tangent-pfapfaidzo-crimping, ultrasonic kutenderera, kupisa-kunodzikira tubing, yakamisikidzwa waya, kufukidza kwegungano uye zvishongedzo, magetsi kuita kwekuyedza, kupemha ...
Ndezvipi zvinhu zvakakosha zvekufunga nezvazvo pakusarudza mapini, mahofisi uye mabheji ekupedzisira kwetambo yakasungirwa waya kana tambo yegungano?
Iwo mapini, mahofisi uye terminal block inogona kunge iri yakakodzera chishongedzo chigadzirwa chakajaira kuona yemagetsi kubatana, yakakamurwa muchikamu chekubatanidza mukati meindasitiri. Icho chidimbu chesimbi-yakavharirwa mupurasitiki yekudzivirira. Kune maburi kumativi maviri ekuisa waya. Pane ...
Anti-kunofambira mberi waya sunga
Pandakabvisa juzi rangu mumatsutso nemuchando, ruzha rwunobuda rwakaramba rwuchirira. Ichi chiitiko chinowanzoitika muhupenyu. Mukugadzirwa kweimwe yakasarudzika wiring maharanzi, static magetsi anokuvadza zvakanyanya kumagetsi zvigadzirwa. Njodzi dzemagetsi emagetsi kune emagetsi com ...
Zvemotokari wiring sunga: deredza mutengo uye huremu nekurerutsa wedunhu dhizaini
Nekurerutsa dhizaini dhizaini, vagadziri vemotokari vari kudzidza zvimiro zvitsva zvemagetsi nemagetsi, nokudaro vachideredza zvakanyanya mutengo uye huremu. Iyi dhizaini inogona kudzora wiring inodiwa kutsigira akasiyana mota mashandiro, uye ine mukana wekudzikisa huremu, kugonesa otomatiki kugadzirwa ...
Maitiro ekushandisa emagetsi ekubatanidza
Kana zviri izvo chinangwa chekushandiswa kwemotokari zvinongedzo, kuitira kuti tione kushanda kwakanaka kwemota, tinogona kupatsanura kuvimbika kwechibatanidziro mukuisa chisimbiso kuita kwechibatiso chiri kushandiswa, chekupenya-chiratidzo chekuita kwe mota mukutyaira, uye mashandiro o ...
Chii chinomiririrwa netambo yechigamba pane yega sensor yemota?
Munharaunda yanhasi, kushandiswa kwema sensors kwakapinda muhupenyu hwevanhu. Iyo sensor chinhu chinowanzo shandiswa, icho chinonyanya kutamba chinzvimbo cheruzivo fomu fomu kutendeuka, mazhinji acho anoshandura mamwe mafomu emasaini kuita masaini emagetsi ekuona zviri nani uye kuongorora ...
Dhizaini dhizaini yemotokari wiring sunga inopindirana
Iko kune kwakawanda uye kwakawanda magetsi emagetsi akaiswa mumota, izvo zvinoita kuti zvibatanidzwe mapoinzi newaya pamotokari yese iwedzere uye yakawanda. Mune waya waya dhizaini, maitiro ekuona kuti yakavimbika wiring yemagetsi michina inyaya yakakosha. Mukugadzirwa kwemaitiro, nzvimbo yekumisikidza uye groun ...
Ndezvipi zvinodiwa zvinofanirwa kusangana nemotokari?
Kana mota ichimhanya, zvikamu zvese zvinofanirwa kushanda uye zvichinyatsoenderana pakati pechikamu chimwe nechimwe. Mukubatana kwezvikamu zvemotokari, chinongedzo chinoita basa rakakosha kwazvo. Kunyangwe iri yemagariro mota kana nyowani simba mota, chinongedzo chinogara chiri musimboti weiyo ...
Ndeapi maitirwo emota wiring sunga
Imwe: Vhura tekinoroji tekinoroji. Kururamisa kwetambo-kuvhura maitiro kunoenderana zvakanyanya neyakagadziriswa purogiramu yese. Kunyanya panguva yekuvhurwa kwewaya, kana chikanganiso chikaitika, kunyanya kana saizi yewaya iri pfupi kwazvo, zvinokonzeresa kuti zviteshi zvese zvishande zvekare, izvo zvinotora nguva nesimba ...
5 Zvikonzero Nei Yakagadziriswa waya Uye Tambo Zviri Nani
Nemakwikwi makuru atinoona mumusika nhasi, vagadziri vari kutarisira kugadzira zvigadzirwa zvinodhura kune vatengi vavo, kunyangwe kana izvi zvichireva kukanganisa kunaka. Zvakanaka, hatitaure kuti mugadziri mumwechete akafanana, asi kana ukatarisa pamufananidzo muhombe, uchaona akawanda c ...
Mhando, kutadza nzira, uye nzira dzekutarisa dzemotokari wiring mahanesi
Iyo mota wiring sunga ndiyo network network yemotokari wedunhu, uye hapana mota wedunhu isina wiring tambo. Mune mota wiring sunga, iyo waya chikamu chakakosha chayo. Chinyorwa ichi chinonyanya kutaura nezvemhando, kutadza nzira uye nzira dzekutsvaga dzemotokari wirin ...
Unoshinga kuchovha bhazi risina mutyairi here?
Kuedzwa kwekuedzwa kwebhazi rekutanga risina mutyairi muShenzhen kwakurudzira kuvimba musimba renyika yangu. Munguva iyi, United States neSingapore zvakatangawo kuita bvunzo dzisina kutyaira. Chinhu chinoshamisa ndechekuti dzinenge mota dzese dzisingatyairi dzinotanga kubva kumabhazi. Th ...
Ndedzipi shanduko idzo "mota wiring sunga" inotora nekuzvityaira kutyaira?
Kune mainjiniya uye vagadziri vezvigadzirwa, kutarisana nekuoma kwemotokari dzemazuva ano dzakazvimiririra dzatove dzakaoma, asi kuomarara kweramangwana kunongowedzera kwete kudzikira. Vachapindura sei? Mota dzemazuva ano dzakabatanidzwa kuburikidza neepamusoro-bandwidth manejimendi-chikamu sensor network, ...
Zvakanakira kushandisa zvinongedzo
Vandudza maitiro ekugadzira Iyo yekubatanidza inorerutsa iyo yemagetsi gungano maitiro. Iyo inogona zvakare kurerutsa iyo yakawanda kugadzirwa maitiro; Kugadziriswa kuri nyore Kana chinhu chemagetsi chikatadza, chinhu chakakanganisika chinogona kuchinjwa nekukurumidza mushure mekunge chinongedzo chagadziriswa. Nyore kusimudzira Kana iyo techn ...
Maitiro ekutarisa mhando yewaya tambo yekugadzirisa mabhizinesi
Hazvina mhosva kuti ndechipi chigadzirwa chinogadzirwa, pane dambudziko rakabatanidzwa mukugadzirisa kwehunhu hwechigadzirwa, ndiko kuti, ndizvo zvazviri kune makambani ekugadzirisa waya, saka waya anofanirwa kusunga makambani ekugadzirisa mhando yechigadzirwa? 1. Chekutanga pane zvese, akakodzera kudzidzira basa rinofanirwa kuve mota ...
Kufuridzira zvinhu zvekubata kuramba kwemotokari zvinobatanidza
Vakasiyana chinouraya zvinhu vane zvakasiyana neukukutu uye conductivity. Kubudikidza nekuongororwa kwesimba rekubata kuramba, zvinogona kuoneka kuti iyo chaiyo nzvimbo yekutaurirana yeumwe neumwe wekubata interface yeiyo terminal nekuoma kwakasiyana kwakasiyana, izvo zvinoguma nemusiyano pakati pe ...
Tsvagiridzo yeKugadzira Tekinoroji yeCar Connectors
Makwikwi ezvikamu zvemotokari anogona kuvimba neyakaenderera mitsva yekugadzira tekinoroji uye nekuenderera kuri kuvandudzwa kweyekugadzira tekinoroji, kuti iwedzere simba rekugadzira rezvinhu uye iverenge mhando yezvigadzirwa. 1.Mhando yekugadzira tekinoroji: Iyi tekinoroji iri ...
Maitiro ekugadzirisa mota wiring sunga?
Iyo yekuchengetedzwa kweiyo wiring harness inofanirwa kuve iro rekutanga basa mukuchengetedza kwemotokari maseketi. Iko kunaka kweiri basa rekutanga rakanangana zvakananga nehunhu hwekuchengetedza mutsara. Fungidzira kuti kana hunyanzvi hwekutanga hwekubatisa harness yekugadzirisa usiri panzvimbo, nhevedzano yedunhu ...
Iyo yakasarudzika nzira yemotokari wiring sunga dhizaini uye kugadzira
ne admin pane 20-11-28
Yakanangana nemabatiro emota wiring dhizaini nekugadzira: 1. Kutanga, injinjini yekumisikidza magetsi inopa mashandiro eiyo ese magetsi system, kusanganisira iwo wese magetsi mutoro uye zvine hukama zvakakosha zvinoenderana. Mamiriro ezvinhu emagetsi, iyo yekumisikidza loca ...
Tambo yemagetsi ine kukosha kwekushandisa
Maseketi emagetsi chikamu chakakosha kwazvo chehupenyu hwedu, uye maseketi emagetsi anotambawo mabasa akawanda mukusimbisa mune zvakasiyana zvigadzirwa zvatinoshandisa zuva nezuva. Nekudaro, sechinhu chinotsigira chekushandisa magetsi akachengeteka, mitsara mizhinji yakavanzika, asi izvi hazvivanze hunhu o ...
Zvine zvakakosha zvekuumbwa kwemotokari zvinobatanidza
Chigadziko chemotokari chinhu chinogunzva magetsi neinjiniya. Basa rayo rakareruka: kuvaka bhiriji rekutaurirana mukati medunhu kana pakati pemaseketi asingakwanise kupihwa simba, kuti iyo yazvino ikwanise kuyerera uye dunhu racho riite predetermi ...
Nzira yekuisa mota anti-kuba system
Automobile anti-kuba system inowanzo sanganisira inomiririra, sensor, kuratidza, wiring harness, remote control, nezvimwewo. : 1.Vhura iyo yekushongedza pani kunyanya pa bot ...
Chii chinoratidza kukura kwesimba uye kutaurirana maindasitiri?
Dhata kubva kumagetsi emagetsi uye maindasitiri ekutaurirana anoratidza kuti kudiwa kwetambo munzvimbo dzakasiyana dzekushandisa kuri kuwedzera nekukurumidza. Semuenzaniso, coaxial tambo dzakakosha pakufambisa foni uye materevhizheni masaini kana kubatana kune zvekurapa zvekushandisa, uye zvinofanirwa kuve iwe ...
Wiring uye kusiyanisa kwetambo dzemagetsi
Mumidziyo yemumba, kusanganisira wiring yemumba, tinowanzosangana netambo dzemagetsi. Tambo yemagetsi inopinda mumba medu kuburikidza nemitsara mitatu: live, neutral uye pasi. Kuti tirege kuvhiringidzika, tinotevera kodhi yemavara inoshandiswa kuisa idzi waya. Mutsara mutsvuku ndiwo mutsetse wekurarama uye nhema nhema ...
Kuchengetedza uye njodzi dzakavanzika dzemotokari wiring sunga
Ngatikurukurei nezvekuchengetedzwa kwemotokari tambo tambo. Nhasi, mota dzinoshandiswa kudzivirira kurovera uye kuchengetedza moto. Anti-kukiya mabhureki emidziyo, traction kudzora, mabhandi echigaro uye maairbags anoshandiswa zvakanyanya mumotokari kuita kuti mota dzive dzakachengeteka. Zvikanganiso mumotokari tambo tambo dzinogona kukonzeresa moto nezvimwe ...
Nekubuda kwekuzvimiririra kutyaira, koira yemotokari inofanirwa kukura sei?
Mazuva ano, mota yakasarudzika yakasungwa neseri uko, ichiisa mamaira etambo. Kunyangwe mota yakakwenenzverwa inogona kumhepo kupfuura mamaira etambo mairi. Nekuuya kwemotokari dzakabatana, epamberi ekuchengetedza masystem uye akazvimiririra ekutyaira matekinoroji, kudikanwa kweiyo wiring kuchakwira. Noboru Osada, iyo glob ...
Zvigadziriso zvinogadziriswa zvechero wiring sunga
Kubva pamatanho akapusa eakakosha kusvika kune yakaoma maneti-maconductor, Olink anogona kubatsira mukugadzira zvigadzirwa zvitsva kana kugadzirisa nekuvandudza masisitimu aripo. Isu takagadzira runyorwa rwekushandisa zvichienderana nemakumi emakore emaoko-pane ruzivo mune yakasarudzika tambo tambo uye sunga kugadzira. Iine zvinopfuura ...
Izvo zvinoshandiswa uye mashandiro eiyo kurukwa kwetambo uye waya
Tambo tambo dzinonyanya kuve dzinoumbwa nematatu akakosha ekuumbwa zvinhu: conductive musimboti, kuputira dura uye sheath rukoko. Uye mutsauko uripo pakati petambo newaya hauna mitsara yakaoma. Asi kubva pakuona kwakakura, chimiro chetambo chakanyanya kuomarara, uye kune yakaoma sh ...
Ndezvipi zvinoshandiswa nesilicone yakakwira tembiricha waya?
Silicone yakakwira tembiricha tembiricha ine yakanakisa yakakwira tembiricha uye yakaderera tembiricha kuramba, yakanakisa yemagetsi kuputira mashandiro, yakanakisa makemikari kugadzikana, yakakwira voltage kuramba, kuchembera kuramba, uye hupenyu hwakareba hupenyu. Uye yakapfava uye yakapusa kuisa. Silicone yakakwirira tembiricha waya h ...
Ndeupi musiyano uripo pakati pekereke tambo uye waya tambo
Magetsi wirings ndiwo tsinga uye yakavanzwa chikamu chakakosha chemaindasitiri mazhinji. Aya wirings akakosha nekuti anotsigira akadai mabhizinesi kuti arambe achifambira mberi. Imba inodawo waya kana tambo kuti iwane magetsi ekushandisa zvishandiso nemimwe michina yemagetsi ....
Nhanganyaya kune ruzivo rwekutanga rwekusunga wiring ini
Waya Sunga dzakateedzana 1. Wires Sunga: Inoshandiswa kubatanidza maviri kana anopfuura mawaya ane zvikamu zvekufambisa zvazvino kana zviratidzo. Inogona kurerutsa gungano maitiro ezvigadzirwa zvemagetsi, zviri nyore kuchengetedza uye kusimudzira, uye kugadzirisa dhizaini kuchinjika. Iyo yekumhanyisa-kumhanya uye digitization yechiratidzo tra ...
Sarudzo ye wiring sunga zvinongedzo zvemotokari
Sarudzo yewiring harness zvinongedzo zvemotokari Iyo inobatanidza chikamu chakakosha cheiyo wiring harness, inoshandiswa kubatanidza uye kuchengetedza iyo wiring harness. Kuti uve nechokwadi chekutapurirana kwesimba nemasaini, kusarudzwa kwezvinobatanidza kwakakosha. Ichi chinyorwa chinozivisa precauti ...
Chinongedzo cheruzivo sumo uye nhoroondo yayo yekuvandudza
Mhando dzakasiyana dzemagetsi ekubatanidza zvinhu zvakakosha muzvinhu zvisingaverengeki zvemagetsi nekuti vanogona kuona nekudzivirira kutapurirana kwemasaini emagetsi. Kubva pakubatanidza makiyi akakosha emakomputa waya ekubatanidza waya mumota dzatinotyaira, vanotamba dzakasiyana siyana mabasa, uye mashandiro acho ...
Ruzivo rwekutanga rwemotokari wiring sunga dhizaini
Ruzivo rwekutanga rwekugadzira mota wiring dhizaini Iyo mota wiring sunga ndiyo huru muviri wedunhu mota, uye hapana mota wedunhu isina wiring harness. Parizvino, ingave yepamusoro-yekupedzisira mota yemhando yepamusoro kana yakachipa yakajairwa mota, fomu yemahara waya ...
waya gungano VS waya sunga
Cable Assembly. Waya Sungai Iwo mazwi ekuti "waya musangano" uye "waya sunga" anowanzo shandiswa zvakasiyana. Muchokwadi, mazwi ekuti "tambo" uye "waya" anoshandiswa zvakare zvakasiyana. Asi, izvi ndezve munhuwo zvake. Kune vehunyanzvi nevaya vanoziva nezve hunyanzvi hweizvi zvinhu, ese ma ...
Waya Sungai Connectors Uye Zviteshi - Kugadzira Iyo
rness Connectors Uye Zviteshi - Kugadzira Sarudzo Yakakodzera Tambo tambo chinhu chinogadzira tambo dzakafanana dzemagetsi tambo dzinotumira masaini kana simba; tambo dzichisungwa pamwechete nematepi emagetsi, makoti, tambo, kana zvimwe zvakadaro. Asi, aya waya emahara haasi ekushandisa chero kana ...
NEI KUSVIKIRA KWEMAWARI KUSIMBISA KUSUNGE KUSAGADZISWA ZVAKAZARA
Kana isu tichifunga nezvekugadzira mu21st Century, isu mifananidzo otomatiki michina ichikurumidza kupomba kunze zvigadzirwa zvitsva nyore. Saka nei madanho eakaomarara waya tambo yekugadzira ichizadzikiswa zvizere zvakare? Kuti upindure uyu mubvunzo, tinoda zvakadzika pasi ...
Wire Sunga Dhizaini
Tambo yemahara inowanzo gadzirirwa kurerutsa kugadzirwa kwechinhu hombe, uye yakagadzirirwa zvichienderana nejometri uye zvemagetsi zvinodiwa zvemidziyo iyo ichaiswa mukati. Waya mahanesi anowanzo shandiswa muindasitiri yemagetsi, mota ...
Mugore Rimwe Chete, Mamirioni Emota Anogadzirwa Pasi Pose.
ne admin pane 20-08-17
Mugore rimwe chete, mamirioni emota anogadzirwa pasirese. Kunyange zvitaera, zvikamu uye maficha zvichisiyana, mota yega yega inoda waya tambo. Iyo tambo inobatanidza iyo wiring mukati memotokari, ichimisikidza zvese kubva kumagetsi kutungamira uye mwenje yemwenje kuenda mu-dash ...
OLINK TECHNOLOGY NEWS - CHII CHINONZI KUTI UWIRINGI? Wiring harnesses ndiwo magungano ane akawanda akamiswa waya akagurwa kana kusungwa pamwechete. Aya magungano anofambisa kumisikidza panguva yekugadzirwa kwemotokari. Ivo ...
Cable uye Wire Sunga Kudzidziswa
Uku ndiko kuiswa kune YAKANAKA tambo uye waya sunga maoko pakirasi yegungano. Aya maoko ari mukirasi ayo waya anosunga vavaki anogona kuwedzera pane yavo 620 yekuongorora maitiro zivo kana kukwanisa kudzidzisa vashandi vatsva pane akakodzera matekiniki ekucheka, kufumura, kurura uye kusangana ...